Millennium, Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Millennium waa waqtiga lagu sharaxay kitaabka Muujintii muddadii uu shahiiday Masiixiyiintu la xukumi doonaan Ciise Masiix. Markay kunka sano kadib, markuu Masiixu burburiyey cadaawayaashii oo dhan, oo uu wax walba u xilsaaro, wuxuu boqortooyada u gacan gelin doonaa Ilaaha Aabbaha ah, oo jannada iyo dhulkaduna waa is beddeli doonaan. Qaar ka mid ah caadooyinka Masiixiyiinta ayaa macno ahaan u tarjuma kunka kun sida kun sano ka hor ama raacaya imaatinka Masiixa; qaar kalena waxay u arkaan tarjumaad sawir ahaan macnaha guud ee Qorniinka: muddo aan go'nayn oo ka bilaabaysa sarakicidda Ciise oo ku dhammaata soo laabashadiisa. (Muujintii 20,1: 15-21,1.5; 3,19: 21-11,15; Falimaha Rasuullada 1: 15,24-25; Muujintii; Korintos)
Laba aragti oo kun sano
Masiixiyiin badan, Millennium-ka waa caqiido aad muhiim u ah, waa war wanaagsan. Laakiin ma adkeyneyno kun-sano. Sababta Sababtoo ah waxaan ku saleyneynaa waxbaristeena Kitaabka Quduuska ah, iyo Kitaabka Quduuska ah kama dhigayo hadal cad oo ku saabsan mowduucan sida dadka qaar u maleeyaan. Tusaale ahaan, intee in le’eg ayay kumannaan sano jirtaa? Qaarkood waxay yiraahdaan waxay qaadan doontaa saxda 1000 sano. Muujintii 20 waxay sheegaysaa kun sano. Ereyga "Millennium" macnaheedu waa kun sano. Muxuu qof uga shakisan yahay tan?
Marka hore, maxaa yeelay buugga Muujintii wuxuu ka buuxa astaamo: xayawaan, geeso, midabbo, tirooyin calaamad leh, oo aan macno ahaan ahayn. Qorniinka, lambarka 1000 waxaa badanaa loo isticmaalaa lambar wareeg ah, ma aha tirinta saxda ah. Eebbe wuxuu yidhi in xayawaannada buuraha joogaa ay kun yihiin, looma jeedo inay ka dhigan tahay tiro sax ah. Wuxuu u arkaa axdigiisa inuu yahay kun geesood, oo aan macnaheedu ahayn 40.000 oo sano. Qoraallada noocan oo kale ah, kun waxaa loola jeedaa tiro aan xad lahayn.
Sidaa darteed, "kun sano" Muujintii 20 ma tahay suugaan mise waa in si muuqata loo fahmaa? Tirada kun ee ku jirta buuggan calaamadaha, oo inta badan aan macno ahaan loola jeedin, ma loo fahmi karaa si sax ah? Kama caddayn karno Qorniinka in kunka sano ay tahay in si sax ah loo fahmo. Sidaa awgeed, ma dhihi karno in kunku sanadku si sax ah u yahay kun sano. Si kastaba ha noqotee, waxaan dhihi karnaa "kunka sano waa xilligii lagu sharraxay Muujintii ..."
Waxaan sidoo kale dhihi karnaa kun sano waa "mudada markii shahiid kiristaanku la xukumo ciise masiix". Muujintii waxay noo sheegaysaa in kuwa Masiixa looga gooyay ay isaga la xukumi doonaan, waxayna noo sheegaysaa inaan Masiixa la xukumidoono kun sano.
Laakiin goorma ayay quduusiintani bilaabaan inay wax xukumaan? Su'aashan waxaan uga dhex baxnaa su'aalo aad iyo aad looga doodayo oo ku saabsan Millennium-ka. Waxaa jira labo, saddex, ama afar aragtiyo ah oo kunka sano jira.
Qaar ka mid ah aragtiyadan ayaa ah kuwo macno ahaan ugu taagan qaabkooda Qorniinka qaarna si macquul ah. Laakiin ma diido qoraalada Kitaabka - waxay u turjumayaan si ka duwan keliya. Dhammaantood waxay sheeganayaan inay ku saleeyaan aragtidooda ku saabsan Qorniinka. Intabadan waa arin tarjumaad ah.
Halkan waxaan ku sharraxaynaa labada aragtiyood ee ugu badan ee kunka-sano ee leh awoodooda iyo daciifnimadooda, ka dibna waxaan dib ugu laaban doonaa waxa aan dhihi karno si kalsooni weyn.
Marka laga eego aragtida sanadlaha ah, Masiixu wuxuu soo noqonayaa kahor kunka sano.
Marka laga eego aragtida sanadka, Masiixu dib ayuu u soo noqonayaa kunka sano kadib, laakiin waxaa lagu magacaabaa amillenni ama ma ahan kumanaanta maxaa yeelay wuxuu leeyahay malahan kun sano oo gaar ah oo ka duwan midka aan hadda ku jirnay. Aragtidan waxay dhahdaa waxaan horeyba ugu jirnay waqtigii Muujintii 20ka ay qeexeysaa.
Tani waxay umuuqataa wax aan macquul ahayn haddii qofku rumeeyo in xukunka kunka sano uu yahay waqti nabadeed oo suuragal noqon doonta kadib markuu Masiixu soo noqdo. Waxay u muuqan kartaa in "dadkani aysan rumaysanayn Kitaabka Quduuska ah" - laakiin waxay sheeganayaan inay aaminsan yihiin Baybalka. Danaha jacaylka Masiixiyiinta, waa inaan isku daynaa inaan fahanno sababta ay u rumaysan yihiin in Baybalku sidan u leeyahay.
Aynu ku bilowno soo bandhigista booska bilowga-sanadka.
Axdiga Hore: Marka hore, waxsii sheegyo badan oo ku saabsan Axdiga Hore waxay sii sheegeen da 'dahabi ah markay dadku xiriir sax ah la leeyihiin Ilaah. «Libaaxa iyo wanka ayaa isla jiifsan doona, oo wiil yar ayaa wadi doona iyaga. Oo Rabbigu wuxuu leeyahay, Buurtayda quduuska ah meelnaba lagu arki maayo dembi iyo xumaan toona.
Mararka qaar waxay umuuqataa in mustaqbalkani uu si weyn uga duwanaan doono dunida maanta; mararka qaarkood waxay umuuqataa inay lamid tahay. Mararka qaarkood waxay umuuqataa mid qumman mararka qaarkoodna waxaa lagu qasaa dembi. Tusaale ahaan sida Ishacyaah 2, tusaale ahaan, dad badan ayaa oran doona: Ina keena aynu tagnee buurta Rabbiga, oo aan u kacno guriga Ilaaha reer Yacquub, inuu ina barto jidadkiisa, oo aynu ku soconno waddooyinkiisa! Xukunka waxaa ka soo bixi doona Siyoon, oo erayga Rabbiguna Yeruusaalem buu ka iman doonaa. (Ishacyaah 2,3).
Si kastaba ha noqotee, waxaa jiri doona dad u baahan in la canaanto. Dadku waxay u baahan doonaan qodxodasho sababtoo ah waa inay wax cunaan, sababtoo ah waa dad dhiman. Waxaa jira walxo kufiican waxaana jira waxyaabo caadi ah. Waxaa jiri doona carruur yaryar, waxaa jiri doona guur, iyo dhimasho.
Daanyeel wuxuu inoo sheegayaa in Masiixu dhisi doono boqortooyo ka buuxi doonta dunida oo dhan oo beddeleysa boqortooyooyinkii hore. Waxaa jira dhowr iyo toban oo waxsii sheegyadaan ah oo ku sugan Axdiga Hore, laakiin uma ahan kuwo muhiim u ah su'aasheena gaarka ah.
Yuhuuddu waxay u fahmeen waxsii sheegyadaas inay tilmaamayaan da'da mustaqbalka ee dhulka. Waxay filanayeen in Masiixu yimaado oo xukumo oo keeno barakooyinkaas. Suugaanta Yuhuudda kahor iyo kadib Ciise waxay rajeyneysaa boqortooyo Ilaah oo dunida kajirta. Xertiisa Ciise waxay umuuqataa inay filayeen sidaas oo kale. Marka markuu Ciise wacdiyey injiilka boqortooyada llaah, annagu iskama dhigi karno in waxsii sheegyada Axdiga Hore aysan jirin. Wuxuu wacdiyey dad sugaayay da ’dahab ah oo uu xukumi doono Masiixa. Markuu ka hadlayey "Boqortooyada llaah" maskaxdooda ayay ku jirtay.
Xertii: Ciise wuxuu ku dhawaaqay in boqortooyadu ay soo dhowdahay. Markaas wuu ka tegey oo wuxuu ku yidhi wuu soo noqon doonaa. Way ku adkaan laheyd kuwa raacsan inay soo gabagabeeyaan inuu Ciise keeni doono da 'dahabka ah markuu soo laabto. Xertii waxay weyddiiyeen goorta uu boqortooyada u soo celin doono Israa'iil (Falimaha Rasuullada 1,6). Waxay adeegsadeen erey Giriig ah oo lamid ah markay ka hadlayaan wakhtiga dib u soo celinta wax walba markuu Masiixu soo noqonayo Falimaha Rasuullada 3,21: "Jannada waa inay soo dhowaysaa ilaa wakhtiga waxyaalaha Ilaah ku hadlay oo dhan afka laga soo celin doono." nebiyadiisii ​​quduuska ahaa tan iyo bilowgii. "
Xertiisu waxay filayeen in wax sii sheegidda Axdiga Hore lagu rumoobi doono mustaqbalka soo laabashada Masiixa ka dib. Xertiisu wax badan kama wacdiinin dahabsan sababta oo ah dhagaystayaasheeda Yuhuuddu mar hore way yaqiinsadeen fikirkaan. Waxay ahayd inay ogaadaan cidda Masiixu ahaa, sidaa darteed taasi waxay diiradda saaraysay wacdinta rasuullada.
Marka loo eego dadka wax qortay, wacdinta rasuullada waxay diirada saartey wax cusub oo Ilaah ku sameeyay Masiixa. Sababta oo ah waxay diirada saartey sida ay badbaadadu ugu suurta gasho Masiixa, umana baahna inay wax badan ka sheegto boqortooyada mustaqbalka, iyo way adagtahay maanta inaan ogaano waxa ay rumeysanyihiin iyo inta ay ka ogaadeen. Si kastaba ha noqotee, waxaan aragnaa muuqaal yar oo warqaddii ugu horraysay ee Bawlos u qoray Korintos.
Paul: 1 Korintos 15, Bawlos wuxuu faahfaahin ka bixinayaa aaminsanaanta sarakiciddiisa, macnaha guudna wuxuu ka sheegayaa wax ku saabsan boqortooyada Ilaah oo dadka qaar rumeysan yihiin inay muujineyso boqortooyo kumanaan ah kadib soo laabashada Masiixa.
Waayo, sidii Aadan ugu wada dhintaan, sidaas oo kalaa dhammaan Masiixa loogu wada noolayn doonaa. Laakiin mid kastaa sidii loogu qoray dabadeed, markuu yimaado, kuwa Masiix leh (1 Korintos 15,22: 23). Bawlos wuxuu sharxayaa in sarakicidda ay ku imaaneyso isku xigxiga: Masiixa ayaa marka hore, ka dibna rumaystayaasha dambe. Bawlos wuxuu erayga "kadib" u adeegsaday aayadda 23 si uu u muujiyo dib u dhac ku saabsan qiyaastii 2000 oo sano. Wuxuu u adeegsaday erayga "ka dib" aayadda 24 si uu u muujiyo tallaabo kale oo isku xigxiga:
«Markaas dhammaadka, markii boqortooyada loo dhiibo Ilaaha Aabbaha ah, ka dib markuu baabbi'iyo dhammaan xukunka iyo xoog kasta iyo rabshad. Sababtoo ah waa inuu xukumo ilaa Ilaah cadaawayaasha oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo. Cadawga ugu dambeeya ee la burburiyo waa dhimasho » (Aayadaha 24aad).
Haddaba Masiixu waa inuu xukumo ilaa uu cadaawayaashiisa cagihiisa oo dhan cagihiisa hoostooda geliyo. Kani maahan dhacdo hal-mar ah - waa muddo waqti ah. Masiix wuxuu xukumaa waqti kaas oo uu baabi'inayo cadaawayaasha oo dhan, xitaa cadawga dhimashada. Oo markay waxaas oo dhan dhammaadaan ayaa dhammaadka.
In kasta oo Bawlos uusan ku qoreynin tillaabooyinkaas taariikh gaar ah, adeegsiga erayga "kadib" wuxuu muujinayaa tallaabooyin kala duwan oo qorshaha ah. Marka hore sarakicidda Masiixa. Tallaabada labaad waa sarakicinta rumaystayaasha kadibna Masiixu ayaa xukumi doona. Aragtidan, tallaabada saddexaad waxay noqon doontaa in wax walba la siiyo Ilaaha Aabbaha ah.
Muujintii 20: Axdigii Hore wuxuu saadaaliyay da 'dahab ah oo nabad iyo barwaaqo ah oo hoos imaanaysa xukunka Ilaahay Bawlosna wuxuu noo sheegayaa in qorshaha Ilaah uu horumar sameynayo. Laakiin aasaaska dhabta ah ee aragtida sanadlaha ah waa Kitaabka Muujintii. Kani waa buugga ay dad badani rumeysan yihiin inuu muujiyo sida ay dhammaantood isugu yimaadaan. Waxaan u baahanahay inaan waqti ku qaadano Cutubka 20aad si aan u aragno waxa uu leeyahay.
Waxaan ku bilaabeynaa annagoo u fiirsanayna soo laabashada Masiixu in lagu sharxay Muujintii 19. Waxay sharraxaysaa cuntada arooska ee wanka. Waxaa jiray faras cad, kii fuushanaana waa erayga Ilaah, Boqorka boqorrada iyo Sayidka sayidyada. Isagu wuxuu ka soo kaxeeyaa ciidammada samada, isaguna wuu jiraa
xukumaa quruumaha. Wuu ka adkaaday bahalkii, nebigii beenta ahaa iyo ciidankiisii. Cutubkani wuxuu sharraxayaa soo laabashada Masiixa.
Ka dib waxaan u nimid Muujintii 20,1: "Oo waxaan arkay malaa'ig samada ka soo degaysa ..." Qulqulka suugaanta ee buugga Muujintii tani waa dhacdo dhacda ka dib soo laabashada Masiixa. Muxuu sameeyay malaggan? «... wuxuu haystay furihii yaamayska iyo silsilad weyn oo gacanta ku jirta. Oo isna wuxuu qabtay masduulaagii ahaa abeesadii hore, taas oo ah Ibliiska iyo Shayddaanka, oo wuxuu xidhay muddo kun sannadood ah. Silsiladdu ma aha mid suugaaneed - waxay u taagan tahay wax ruuxu xakameyn karo. Laakiin sheydaanka waa la rabbeeyay.
Akhristayaashii asalka ahaa ee Muujintii, oo ay silcin jireen Yuhuudda iyo Roomaanku, miyay u malaynayaan in Shaydaanku horeba u xidhnaa? Waxaan ku baranaynaa cutubka 12aad in sheydaanku khiyaaneeyo adduunka oo dhan oo uu dagaal ku qaado kaniisada. Tani uma muuqato shaydaan baa la celinayaa. Dib looma celin doono ilaa bahalka iyo nebiga beenta ah laga adkaado. Aayadda 3: «… oo waxay ku tuurtay yaamayska oo way xirtay oo korkeedana shaabad ku dheji, si ayan mar dambe u khiyaanayn dadka ilaa kunka sano loo dhammeeyo. Markaa waa in la sii daayaa in yar. Yooxanaa wuxuu arkayaa Ibliis oo inyar cabbaya. Cutubka 12 waxaan ka akhrisanay in sheydaanku adduunka oo dhan khiyaaneeyo. Halkan hadda waxaa laga horjoogsaday inuu adduunka khiyaaneeyo kun sano. Kaliya iskuma xirna - waa la xiray waana la xiray. Sawirka nala siiyay wuxuu muujinayaa xaddidaad guud, awood-darro buuxda [si uu u sasabto], wax saameyn ah haba yaraatee.
Sarakicidda iyo xukunka: Maxaa dhaca inta kunkaas sano ah? Yooxanaa wuxuu sharxayaa tan aayadda 4: "Oo haddana waxaan arkay carshiyo, oo way ku fadhiisteen iyaga, xukunkiina waa la siiyey iyaga." Tani waa xukun dhaca Masiixa kadib soo laabashadiisa. Aayadda 4-aad waxay ku sii socotaa oo tiraahdaa:
«Oo waxaan arkay nafihii kuwii madaxa looga jaray markhaatifuridda Ciise iyo erayga Ilaah aawadood, oo aan caabudin bahalkii iyo sanamkiisii, oo aan helin calaamadiisii ​​wejiga iyo gacantooda; way soo noolaadeen oo Masiix bay wax la xukumeen kun sano. "
Halkan Yooxanaa wuxuu arkaayo shahiidiin boqortooyada kula jira Masiixa. Aayaddu waxay tiri waa kuwa madaxa laga gooyay, laakiin waxay u badan tahay inaan loogu talagalin in lagu soo koobo qaabkan gaarka ah ee shuhadada, sida haddii Masiixiyiintii libaaxyadu dileen aysan heli doonin isla abaalmarinta. Taabadalkeed, ereyga "kuwa madaxa laga jaray" waxay umuuqataa weedh u taagan dhammaan dadkii naftooda u huray Masiixa. Masiixiyiinta oo dhami waxay noqon karaan taas. Meel kale oo Muujintii ka mid ah waxaan ka akhrisanay in dhammaan kuwa Masiixa rumaysan ay isaga la xukumi doonaan. Marka qaar baa Masiixa la boqran kun sano halka Shaydaanku xidhan yahay oo aanu dadka sii khiyaanayn karin.
Aayadda 5 ayaa markaa gelinaysa fikir caadi ah: "(Laakiin kuwa kale ee dhintay maynan soo noolaan ilaa kunkii sannadood dhammaadeen)". Marka waxaa jiri doona sarakicid dhammaadka kunka sano. Yuhuuddii kahor Masiixa waqtigeedii waxay rumaysan jireen keliya sarakicid. Waxay rumaysteen oo keliya muuqaalka Masiixa. Axdiga Cusubi wuxuu inoo sheegayaa inay arimuhu isku murugsan yihiin. Masiixu wuxuu imaadaa waqtiyo kala duwan ujeedooyin kaladuwan. Qorshuhu si tartiib tartiib ah ayuu u socdaa.
Axdiga Cusub intiisa badani wuxuu qeexayaa oo keliya sarakicinta dhammaadka da'da. Laakiin buugga Muujintii wuxuu kaloo muujinayaa in tan si tartiib tartiib ah loo sameeyo. Sida ay jiraan in kabadan hal "maalin Rabbiga" sidoo kale waxaa jira in kabadan hal sarakicid. Qoraalka waxaa loo furay si loo muujiyo faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan sida qorshaha Ilaah loo fulinayo.
Dhamaadka faallada soo dhexgalka ee ku saabsan dadka kale ee dhintay, aayadaha 5-6 waxay ku soo noqonayaan kunka sano: “Tani waa sarakicitaankii ugu horreeyay. Waxaa barakaysan oo quduus ah kii ka qayb qaata sarakicidda hore. Geerida labaad awood kuma laha kuwan; laakiin waxay wadaaddo u ahaan doonaan Ilaah iyo Masiixa oo waxay la xukumi doonaan kun sannadood.
Himiladu waxay soo jeedinaysaa inay jiri doonaan wax kabadan hal sarakicid - mid bilowga kunka kun iyo dhamaadka dhamaadka. Dadku waxay wadaaddo iyo boqorro ku noqon doonaan boqortooyada Masiixiga markii quruumaha aan Shaydaanka mar dambe la sasabin.
Aayadaha 7-10 waxay sharraxayaan wax dhamaadka dhammaadka kunka kunemum: Shayddaanka waa la xoreyn doonaa, mar labaad ayuu khiyaanayn doonaa dadyowga, waxay weerari doonaan dadka Ilaah iyo cadowga mar labaad waa la jabi doonaa oo lagu tuuri doonaa barkadda ololka.
Tani waa dulucda aragtida bilowga. Shayddaanka ayaa hadda khiyaanayn dadka oo wuxuu silciyo Kaniisadda. Laakiin warka wanaagsan ayaa ah in kuwa silcin doona kiniisadda waa laga adkaan doonaa, saamaynta shaydaanka ayaa la joojin doonaa, Quduusiinta ayaa la sara kicin doonaa oo Masiix la talin doonaan kun sano. ka dibna
Shayddaanka waa la siidaayaa muddo gaaban ka dibna lagu tuuraa barkadda ololka leh. Markaas waxaa jiri doona sarakicidda kuwa aan Masiixiyiinta ahayn.
Tani waxay u muuqataa inay tahay aragtida in badan oo kaniisaddii hore ay rumaysteen, gaar ahaan Aasiyada Yar. Haddii buugga Muujintii loogu talagalay inuu u gudbiyo aragti kale oo kasta, aragtidiisa ayaa ku guuldaraysatay inay aragti badan ka muujiso akhristayaasha ugu horreeya. Waxay u muuqdeen inay rumeysanayeen in boqornimadii Masiixa ee Masiixi ay soo raaci doonto soo laabashadiisa.
Doodda looga hadlayo amillennialism
Haddii isweydaarsiga sannado badan la caddeeyo, maxay dad badan oo Masiixiyiin ah Baybalka rumaystaa wax kale u rumaystaan? Ma la kulmaan wax cadaadis ama jeesjees ah oo ku saabsan arrintan. Malaha cadaadis muuqda oo banaanka ah oo ay ku rumeeyaan waxkastoo kale, laakiin si kasta oo ay ahaataba. Waxay ku andacoodaan inay rumeysan yihiin Kitaabka Quduuska ah, laakiin waxay ku andacoonayaan in kunka kitaabiga ahi ay dhammaanayaan marka Masiixu soo noqdo, halkii laga bilaabi lahaa. Ku alla kii hadla marka hore wuxuu u eg yahay inuu qumman yahay ilaa kan labaad hadlo (Maahmaahyadii 18,17). Kama jawaabi karno su’aasha illaa aan ka maqalnay labada dhinacba.
Waqtiga Muujintii 20
Marka la eego aragtida amni-sannadeedka, waxaan jeclaan lahayn inaan ku bilowno su'aashan: Kawaran haddii Muujintii 20 aan loo dhammaystirin taariikh ahaan sida ku xusan cutubka 19aad? Yooxanaa wuxuu arkay aragtida cutubka 20 ka dib markuu arkay aragtida cutubka 19, laakiin maxaa dhacaya haddii himiladu ayan ku imaan habkii ay sida dhabta ah wax u fulinayaan? Maxaa dhacaya haddii Muujintii 20 ay noo horseeddo waqti aan ka ahayn dhamaadka Cutubka 19?
Waa tan tusaalaha xorriyadda in loo sii gudbo ama gadaal loo maro waqtiga: Cutubka 11aad wuxuu ku dhammaanayaa buunka toddobaad. Cutubka 12aad wuxuu dib noogu celinayaa haweeney umushay ilmo lab ah halkaasoo naagta laga ilaaliyay 1260 maalmood. Tan waxaa badanaa loo fahmaa inay muujineyso dhalashadii Ciise Masiix iyo cadaadiskii Kaniisadda. Laakiin tani waxay raacaysaa qulqulka suugaaneed ee ka dambeeya buunka toddobaad. Yooxanaa aragtidiisa John dib ayey u qaadatay si uu u soo bandhigo waji kale oo taariikhi ah.
Haddaba su’aashu waxay tahay: tani miyay ku dhacdaa Muujintii 20 sidoo kale? Miyaad dib noogu soo noqotaa? Oo si gaar ah u caddaynaysa, ma jirtaa caddayn ku jirta Kitaabka Quduuska ah in tani ay tahay fasiraad ka wanaagsan waxa Ilaah soo dejiyey?
Haa, ayaa leh aragtida Amillennial. Waxaa jira caddayn ku jirta Qorniinka in Boqortooyada Ilaah ay bilaabatay, in Shaydaanku xidhan yahay, in ay jiri doonto hal sarakicid oo keliya, in soo laabashada Masiixu ay keeni doonto janno cusub iyo dhul aan lahayn weji u dhexeeya. Waa khalad dhaqan ahaaneed in la barbardhigo kitaabka Muujinta, oo leh astaamaha iyo dhibaatooyinka tarjumaadda, oo ay la socoto Qorniinka intiisa kale. Waa inaan u adeegsano kutubta cad si aan ugu tarjunno caddeynta halkii aan ka aheyn habka kale ee ku xeeran. Xaaladda jirta, kitaabka Muujintii waa wax aan caddayn iyo muran, iyo aayadaha kale ee Axdiga Cusub kuwo kale oo cad oo arrinta ku saabsan.
Waxsii sheegiddu waa astaan
Luukos 3,3: 6 wuxuu ina tusayaa, tusaale ahaan, sida aan u fahmayno waxsii sheegyada Axdiga Hore: «Oo Yooxanaa Baabtiisaha wuxuu yimid agagaarka hareeraha Webi Urdun oo dhan wuxuuna ku wacdiyey baabtiiskii toobadda dembidhaafka, sida ku qoran kitaabka hadalkii nebiga Ishacyaah: Wacdiye baa ka yeedhaya lamadegaanka dhexdiisa: Jidka Rabbiga hagaajiya, jidkiisana hagaajiya. Dooxooyinka oo dhan waa in la kordhiyaa, oo buuraha iyo kuraha oo dhanna waa la wada dejin doonaa; wixii qalloocanna waa inuu toosnaado, wixii aan sinnaynna ay noqdaan waddo siman. Dadka oo dhammuna waxay wada arki doonaan Badbaadiyaha Ilaah.
Si kale haddii loo dhigo, Markuu Ishacyaah ka hadlay buuraha, wadooyinka, iyo lamadegaanka, wuxuu ku hadlay hab aad u wanaagsan. Waxsii sheegyada Axdiga Hore waxaa lagu bixiyay luuqad astaan ​​u ah inay matalaan dhacdooyinka badbaadada xagga Masiixa.
Sidii Ciise ku yidhi jidka Emmaus, nebiyadii Axdigii Hore ayaa isaga u gudbiyey. Haddii aan aragno xooggooda ugu muhiimsan mustaqbalka, uma arki doonno waxsii sheegyadaan iftiinka Ciise Masiix. Waxay bedeshaa habka aan u wadaagno dhammaan waxsii sheegyada. Waa diiradda. Isagu waa macbudka dhabta ah, waa Daa'uud dhabta ah, isagu waa reer binu Israa'iil dhabta ah, boqortooyadiisu waa boqortooyada dhabta ah.
Waxaan isla aragnaa Peter. Butros wuxuu sheegay in wax sii sheegid ku saabsan Joel ay rumoobeen waqtigiisa. Aynu fiiro gaar ah u yeelano Falimaha Rasuullada 2,16: 21: "Laakiin waa tan lagu yidhi nebi Yoo'eel: Oo waxay noqon doontaa maalmaha ugu dambeeya, Ilaah baa yidhi, oo markaasaan Ruuxayga ku shubi doonaa binu-aadmiga oo dhan; oo wiilashaada iyo gabdhahaaguna wax bay sii sheegi doonaan, oo barbaarradiinnuna wax bay arki doonaan, oo odayaashaaduna waxay riyooyin noqon doonaan, oo maalmahaas waxaan ku shubi doonaa ruuxayga addoommadayda iyo addoommadayda, iyana wax bay sii sheegi doonaan. Oo waxaan samooyinka sare ku samayn doonaa yaabab, iyo calaamooyin dhulka ka hooseeya, oo ah dhiig, iyo dab, iyo qiiq; Qorraxdu waa in loo beddelaa gudcur Dayaxuna waa in dhiig loo beddelaa ka hor maalinta weyn ee muujinta Rabbiga. Oo waxay noqon doontaa in ku alla kii magaca Rabbiga ku dhawaaqaa, uu badbaadi doono.
Inbadan oo ka mid ah waxsii sheegyada Axdiga Hore runti waxay ku saabsan yihiin da'da Kaniisadda, da'da aan hadda ku jirno. Haddii ay jiraan kun-sano oo weli socda, ma nihin maalmihii ugu dambeeyay. Ma jiri karaan laba weedho maalmihii la soo dhaafay. Markay nebiyadu ka hadlayeen mucjisooyinka cirka iyo astaamaha qorraxda iyo dayaxa, waxsii sheegyada noocan oo kale ah waxaa lagu fulin karaa qaab aan la fileynin - sida si lama filaan ah u daadinta Ruuxa Quduuska ah ee dadka Ilaah iyo ku hadlidda afafka.
Waa inaynaan si otomaatig ah u diidin fasiraadda tusaalaha ah ee waxsii sheegyada Axdiga Hore maxaa yeelay Axdiga Cusubi wuxuu ina tusayaa inaan fahmi karno waxsii sheegyada Axdiga Hore. Waxsii sheegyada Axdigii Hore waxaa lagu buuxin karaa da'da kaniisadda iyadoo loo marayo fulinta astaamaha, ama si ka sii wanaagsan samada iyo dhulka cusub ka dib soo laabashada Masiixa. Wax kasta oo nebiyadu ballanqaadeen waxaan si fiican ugu haysan karnaa Ciise Masiix, ama hadda ama jannada cusub iyo dhulka cusub. Nebiyadii Axdigii Hore waxay ku sifeeyeen boqortooyo aan dhammaanaynin, boqortooyo daa'im ah, daa'in weligiis ah. Kama aysan hadleynin "dahabi dahsoon" oo markaas ka dib dhulka la burburin doono lana dhisi doono.
Axdiga Cusubi ma sharraxo wax sii sheegiddii Axdigii Hore oo dhan. Waxaa jira tusaale ahaan dhammaystirka muujinaya in qoraalladii asalka ahaa lagu qoray luqadda calaamadaha. Tani ma cadeynayso aragtida Amillennial, laakiin waxay meesha ka saartaa carqalad. Waxaan ka heli caddayn dheeraad ah Axdiga Cusub oo horseedda Masiixiyiin badan inay rumaystaan ​​aragtida Amillennial.
Marka hore, aan si dhakhso ah u eegno Daanyeel 2. Ma taageeri karto hordhacnimada, in kasta oo fikradaha qaarkood ay akhriyaan. «Laakiin wakhtiga boqorradan ayaa Ilaaha samadu dhisi doonaa boqortooyo aan weligeed la baabbi'in doonin; oo boqortooyadiisuna dad kale u geli mayso. Way burburin doontaa oo baabbi'in doontaa boqortooyooyinkaas oo dhan. laakiin waligeed way taagnaan doontaa » (Daanyeel 2,44).
Daanyeel wuxuu leeyahay Boqortooyada Ilaah waxay baabi'in doontaa boqortooyooyinka oo dhan oo weligood way sii waari doontaa. Ma jirto wax muujinaya aayaddan in Boqortooyada Ilaahay ay ku soo beegmayso marxalado da 'ah oo kaniisad ay ku dhowaad burburiyeen dhibaato weyn, ka dibna sannado kumanaan sano ah oo ku dhowaad la burburiyey sii deynta Shayddaanka oo ugu dambayntiina ay raacday Yeruusaalem cusub. waa. Maya, aayaddani waxay si fudud u odhanaysaa in Boqortooyada Ilaah ay ka adkaato cadaawayaasha oo dhan oo weligeed sii waari doonto. Looma baahna in laga adkaado cadaawayaasha oo dhan laba jeer ama la dhiso boqortooyada seddex jeer.
Wax sii sheegidda Buurta Saytuun waa wax sii sheegida oo Ciise faahfaahiyey. Haddii kunka sano ay muhiim u yihiin isaga, waa inaan halkaas ku helnaa tilmaam. Laakiin tani maahan kiiska. Taa bedelkeed, waxaan aragnaa sida Ciise u sharaxay soo laabashadiisa, oo isla markiiba ay la socoto xukun xukun oo abaal marin ah. Matayos 25 maahan sharraxa kuwa xaqa ah ee u kacaya xukunka - waxay sidoo kale tusinaysaa sida kuwa sharka leh u hor yimaaddaa xaakinkooda oo loo dhiibo murugada iyo mugdiga ba'an. Halkan wax daliil ah kama hayo kumanaan kun oo sanadood oo udhaxeeya idaha iyo riyaha.
Ciise wuxuu tilmaan dheeraad ah ka bixiyay fahamkiisa wax sii sheegidda ee Matayos 19,28: «Laakiin Ciise wuxuu ku yidhi, Runtii waxaan idinku leeyahay, Kuwiinna i soo raacay, dhalashadaad mar kale yeelan doontaan markii Wiilka Aadanahu carshiga ku fadhiisan doono Ammaantiisana, ku fadhiiso laba iyo toban carshi oo xukuma laba iyo tobanka qabiil oo reer binu Israa'iil.
Ciise halkan kama hadlayo kun sano oo uu dembigu weli jiro oo Shaydaanku si ku-meel-gaadh ah u xidhan yahay. Markuu ka hadlayo dib u soo celinta wax walba, wuxuu macnaheedu yahay cusboonaysiinta wax kasta - samooyinka cusub iyo dhulka cusub. Waxba yuu odhan
in ka badan kun sano muddada u dhaxaysa. Fikraddan ma ahayn Ciise inuu yiraahdo kan ugu yar
muhiim maxaa yeelay waxba kama dhihin arintaas.
Wax la mid ah ayaa ka dhacay kaniisaddii hore. Falimaha Rasuullada 3,21, Butros wuxuu ku yidhi "Masiixu waa inuu jannada ku sugnaado ilaa goortii la soo celin doono wax alla wixii Ilaah kaga hadlay afafkiisa oo nebiyadiisii ​​quduuska ahaa." Masiixu wuu soo celin doonaa wax walba markuu soo noqdo, Butrosna wuxuu yidhi taasi waa fasiraadda saxda ah ee waxsii sheegyada Axdiga Hore. Masiixu kama tago dembiga gadaashiisa si uu u abuuro qalalaase aad u weyn kun sano kadib. Wuxuu hagaajiyaa wax walba hal mar - samada cusbooneysiisay iyo dhul cusbooneysiiyay, dhammaantood hal mar, dhammaan soo laabashadii Masiixa.
U fiirso waxa Butros ku qoray 2 Butros 3,10:12: "Maalinta Rabbigu waxay u iman doontaa sida tuug oo kale; markaa samooyinku waxay ku dhalaali doonaan burburin weyn; laakiin waxyaalaha aasaaska ahu waxay ka dhalaali doonaan kulaylka, oo dhulka iyo shuqullada dushiisa ku jira ayaa xukunkooda heli doona. Harada dabka ayaa dunida oo dhan nadiifisa marka Masiixa la soo noqdo. Waxba kama sheegayo muddo kun sano ah. Aayadaha 14 waxay ku leedahay: «… halkaasoo samadu dab ku dhalaali doonto, waxyaalaha ku jirana kuleyl bay ku dhalaali doonaan. Laakiin waxaynu sugaynaa samo cusub iyo dhul cusub siduu ballanqaaday oo xaqnimadu ku dhex jirto. Sidaas daraaddeed, gacaliyayaalow, intaad sugaysaan, ku dadaala in laydinka helo idinkoo nadiif ah oo eedla'aan nabad ku ah hortiisa.
Waxaan rajeyneynay kumanaan kun, laakiin janno cusub iyo dhul cusub. Markaan ka hadlayno warka wanaagsan ee berri cajiibka ah ee dunida, waxa aan diirada saareynaa ma ahan waqti ku meelgaar ah oo dembiga iyo geeri ay weli jiraan. Waxaan heysanaa war wanaagsan oo aan diirada saareyno: waa inaan sugno inaan soo celino wax walba oo ku jira cirka iyo dhulka cusub. Waxaas oo dhami waxay dhici doonaan maalinta Rabbiga marka Masiixu soo noqdo.
Bawlos wuxuu soo bandhigayaa isla aragtida ku jirta 2 Tesaloniika 1,6: 7-8: «Waayo, xaq bay la tahay Ilaah inuu ka abaal mariyo dhibaatada kuwa ku dhiba, laakiin inuu ku siiyo kuwa dhibaataysan, oo aad nasatid markii Rabbi Ciise yahay Waxaa samada laga muujin doonaa isaga iyo malaa'igaha xooggiisa. Ilaah wuxuu ciqaabi doonaa qarniyadii koowaad ee silcin jiray markuu soo noqdo. Tani waxay ka dhigan tahay sarakicidda gaalada, ma ahan oo keliya kuwa rumaysta, soo celinta Masiixa. Taas macnaheedu waa sarakicis aan waqti u dhaxayn. Wuxuu mar kale ku yidhi aayadaha 10: «… ololka dabka si looga aarguto kuwa aan Ilaah aqoon oo caasiyooba injiilka Rabbigeenna Ciise. Waxay la kulmi doonaan ciqaab, halaag weligiis ah, xagga Rabbiga iyo xooggiisa sharafta leh, markuu yimaado, in isaga loo ammaano quduusiintiisa oo ay ula muuqato inay la yaab ku tahay rumaystayaasha oo dhan maalintaas; maxaa yeelay, waad rumaysateen waxaan idiin caddaynay.
Tani waxay sharraxaysaa sarakicidda, isku waqti, isku maalin maalinta Masiixu soo noqonayo. Markuu buugga Muujintii ka hadlayaa laba soo sarakicis ah, wuxuu khilaafsan yahay wixii Bawlos qoray. Bawlos wuxuu leeyahay kuwa wanaagsan iyo kuwa xunba isla maalintaas ayaa la saraa.
Bawlos wuxuu si fudud ugu celinayaa wixii Ciise ku yidhi Yooxanaa 5,28: 29: “Ha la yaabin tan. Waayo, saacaddu waa imanaysaa markii kuwa xabaalaha ku jiraa dhammaantood ay codkiisa maqli doonaan, oo ay soo bixi doonaan, kuwa wanaagga ku falay xagga sarakicidda nolosha, kuwa sharka falayna ilaa sarakicidda xukunka. Ciise wuxuu ka hadlayaa sarakicidda wanaagga iyo xumaanta isla waqtigaas - oo haddii qofna si fiican u sharxi karo mustaqbalka, wuxuu ahaa Ciise. Haddii aan akhrino buugga Muujintii oo ka hor imanaya wixii Ciise yiri, waxaan si khaldan u fasiraynaa.
Aynu eegno Rooma, Bawlos dulucdiisii ​​ugu dheerayd ee su'aalaha caqiidada. Wuxuu sharaxayaa sharafteenna mustaqbal ee Rooma 8,18: 23: “Waxaan aaminsanahay in silica xilligan lagu jiraa aanu culeys ka saari doonin ammaanta laynoo muujin doono. Maxaa yeelay, sugidda walwalka ee uunka waxay sugeysaa in carruurta Ilaah la muujiyo. Uunku wuxuu ku xidhan yahay amar la'aan, doonistiisa la'aantiis, laakiin waa kan loo sakhiray isaga - laakiin rajo Uunku sidoo kale waa laga xorayn doonaa addoonnimada boqornimada ee xorriyadda ammaanta carruurta Ilaah » (Aayadaha 18aad).
Muxuu abuurku u sugaa carruurta Ilaah markay helaan sharaftooda? Sababtoo ah abuurku sidoo kale waa laga xorayn doonaa addoonsiga - malaha isla waqtigaas. Markii carruurta Ilaah lagu muujiyo ammaanta, abuurku mar dambe ma sii jiri doono. Abuurista ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa - waxaa jiri doona janno cusub iyo dhul marka Masiixu soo noqdo.
Bawlos wuxuu na siinayaa isla aragtida 1 Korintos 15. Wuxuu ku yidhi aayadda 23 in kuwa ka tirsan Masiixa la sara kicin doono markuu Masiixu soo noqdo. Aayadda 24 ayaa markaa noo sheegaysa, "Intaa dabadeed, dhammaadku ..." taasi waa, goorta aakhirku iman doono. Markuu Masiixu u yimaado inuu dadkiisa kiciyo, wuxuu baabi'in doonaa cadaawayaashiisa oo dhan, wax walba wuu soo celin doonaa, boqortooyadana Aabbaha wuu siin doonaa.
Looma baahna in loo baahan yahay muddo kumanaan sano ah inta u dhaxaysa aayadda 23 iyo aayadda 24aad. Ugu yaraan waxaan dhihi karnaa haddii muddo waqti ah uu ku lug leeyahay, muhiim uma ahayn Bawlos. Runtii, waxay umuuqataa in mudadaas oo kale ay ka horimaaneyso wuxuu ku qoray meel kale wuxuuna ka hor imaan doonaa waxa Ciise naftiisa ku dhahay.
Rooma 11 wax kama sheega boqortooyo soo laabashadii Masiixa kadib. Waxa ay leedahay ayaa la jaan qaadi kara waqtigaas oo kale, laakiin ma jiraan wax ku jira Roomaan 11 lafteeda oo noo horseedi karta inaan qiyaasno waqtigaas oo kale.
Hadda waa inaan eegnaa aragtida Yooxanaa ee la yaab leh iyo astaantiisa, ee kicisay muranka oo dhan. Markuu leeyahay xayawaankiisii ​​foosha xumaa iyo astaamaha jannada, miyuu John shaaca ka qaaday waxyaabo uusan rasuullada kale muu muujin, mise wuxuu mar labaad ku soo bandhigayaa qaab isku sheegid ah qaabab kala duwan?
Aynu ka bilowno Muujintii 20,1: 12. Malaa'ig baa [samada ka soo degtay] oo Shaydaanka xidhay. Qof yaqaan cilmiga Masiixa wuxuu u maleynayaa inay taasi horey u dhacday. Matayos, Ciise waxaa lagu eedeeyay inuu ku eryay jinniyo xunxun amiirkooda. Ciise wuxuu ugu jawaabay:
"Laakiin haddaan jinniyada ku saaro Ruuxa Ilaah, boqortooyada Ilaah waa kuu timid" (V. 28). Waxaan aaminsanahay inuu Ciise jinniyo ku saaray Ruuxa Ilaah; sidaas oo kale annaguna waannu isku qancin nahay inay boqortooyada Ilaah wakhtigan timid.
Haddaba Ciise ayaa intaas ku daray aayadda 29: “Ama sidee baa nin u dhici karaa guriga nin xoog leh oo alaabtiisa u xadi karaa haddaanu kolkii hore ninka xoogga leh xidhin? Markaas ka dib ayuu dhici karaa gurigiisa. Ciise wuxuu awooday inuu maamulo jinniyada hareeraheeda maxaa yeelay wuxuu horey u soo galay dunida Shaydaanka wuuna xidhay. Waa isla eraygii loo adeegsaday Muujintii 20. Shaydaanka waa laga adkaaday oo xirmay. Waa tan caddeyn dheeri ah oo tan ah:
Yooxanaa 12,31 Ciise wuxuu yidhi: "Hadda xukunku wuxuu ku soo degi doonaa dunidan; haddaba kan madaxda dunida ah dibaddaa loo tuuri doonaa. Shayddaanka ayaa la tuuray intii uu jiray adeegga Ciise.
Kolosay 2,15 wuxuu inoo sheegayaa in Ciise durba cadaawayaashiisa ka xayuubiyay awoodooda oo "kaga adkaaday iskutallaabta".
Cibraaniyada 2,14: 15 wuxuu inoo sheegayaa in ciise uu sheydaan ku baabiiyey (awooda uu qaatay) dhimashadiisii ​​iskutallaabta - taasi waa eray adag. Sababtoo ah carruurtu hadda waa jidh iyo dhiig, isaguna si isku mid ah ayuu u aqbalay, si dhimashadiisa uu ugala wareego kan dhimashada ka taliya, oo ah Ibliiska.
1 Yooxanaa 3,8 wuxuu leeyahay: "Sababtaas aawadeed ayaa Wiilka Ilaah u muuqday inuu baabbi'iyo shuqullada Ibliiska."
Sida marinka ugu dambeeya ee ku sugan Yuudas 6: "Xitaa malaa'igihii aan ilaalin darajadooda jannada, laakiin ka tegey guryahooda, wuxuu u qabtay xukunka maalinta weyn isagoo leh silsilado daa'in oo gudcurka ku jira."
Shaydaanka ayaa hore loo xidhay. Awoodiisa ayaa horay loo xakameeyay. Markaa haddii Muujintii 20 ay tiraahdo Yooxanaa wuxuu arkay Shayddaanka oo xidhan, waxaan ku soo gabagabeyn karnaa in tani tahay riyo wixii kahoreeyay, wax horay udhacey. Waxaan dib u gaarnay waqtigii aan arki lahayn qayb ka mid ah sawirrada aragtida kale ee aan na tusin. Waxaan aragnaa in kasta oo uu sii waday saameyntiisa, Shayddaanku mar hore waa cadow laga adkaaday. Isagu sii ma sii hayn karo dadka gebi ahaanba la khiyaaneeyo. Bustaha waa laga saaray oo dadka ka yimid quruumihii horeba way maqleen injiilka oo waxay u yimaadeen Masiixa.
Kadibna waxaa nalooga kaxeeyey sawirada si aan u aragno in Shuhadoyinku mar hore Masiixa la jiraan. In kasta oo laga gooyay ama haddii kale la dilay, way soo noolaadeen oo Masiix bay la noolaadeen. Haatan waxay ku sugan yihiin jannada, aragtida sanadka ayaa leh, tanina waa sarakicidda ugu horreysa meeshii ay dib ugu soo noolaadaan markii ugu horreysay. Sarakicidda labaad waxay noqon doontaa sarakicidda jidhka; midda ugu horeysa waa midda saxda ah in isla waqtigaas aan isla qaadanayno Masiixa. Dhamaan kaqeybqaadashada sarakiciddan waa barakaysan oo qoduus.
Geerida hore way ka duwan tahay ta labaad. Sidaa darteed, waa wax aan macquul ahayn in loo qaato in sarakicidda hore ay noqon doonto sida tan labaad. Waxay ku kala duwan yihiin nuxur ahaan. Sida cadaawayaasha Ilaah laba jeer u dhintaan, ayaa kuwa la soo furtay laba jeer u sii noolaan doonaan. Aragtidan shuhadadu mar hore ayey lajiraan Masiixa, way la xukumeen isaga, tanina waxay qaadataa waqti aad u dheer, oo lagu muujiyey weedha ah "kun sano".
Markay wakhtigan dheer dhammaado, Shayddaanka waa la sii dayn doonaa, oo waxaa jiri doona dhib weyn, oo Shayddaan iyo xooggiisuna weligood way adkaan doonaan. Waxaa jiri doona xukun, barkad holac ah, ka dibna samad cusub iyo dhul.
Mowduuc xiiso leh ayaa laga heli karaa qoraalka asalka ah ee Giriigga ee aayadda 8: Shaydaanku wuxuu dadka u ururiyaa maaha oo keliya halganka, laakiin halganka - Muujintii 16,14:19,19 iyo. Dhammaan saddexda aayadood waxay qeexayaan isla halganka weyn ee wadajirka ee soo laabashada Masiixa.
Haddii aynaan haysan wax aan ka ahayn buugga Muujintii, waxaan u badan nahay inaan aqbalno aragtida suugaanta - in Shaydaanku xirnaan doono kun sano, in ay jiri doonto wax ka badan hal sarakicid, in ugu yaraan saddex waji ay ka jiraan boqortooyada Ilaah, inay jiraan ugu yaraan laba dagaal oo soo afjaraya iyo waxaa jira in kabadan hal xukun oo ah "maalmihii ugu dambeeyay".
Laakiin kitaabka Muujintii maahan waxaan haysano oo dhan. Waxaan haynaa kutub kale oo badan
oo si cad u baraaya sarakicidda, oo dhiga in ugudambaysta yimaado markuu Ciise soo noqonayo. Sidaa darteed, haddii aan wax ka dhex aragno buuggan apocalyptic ee umuuqda inuu ka hor imanayo Axdiga Cusub, ma aha inaan aqbalno ajnabiga maxaa yeelay waa kan ugu dambeeya [Buugga Kitaabka Quduuska ah]. Taa bedelkeed, waxaan ku eegnaa macnaha guud buug aan ka mid nahay oo riyooyin ah iyo astaamo, oo waxaan ku arki karnaa sida calaamadaha loogu tarjumi karo qaab aan ka hor imaaneynin inta kale ee Kitaabka Quduuska ah.
Nidaamka fiqi ahaaneed ee adag kama saari karno buugga ugu qarsoodiga badan ee ku yaal Kitaabka Quduuska ah. Taasi waxay casuumi doontaa dhibaatooyinka oo waxay dareenkeena ka leexin doontaa waxa Axdiga Cusubi runtii yahay. Farriinta kitaabiga ahi diirada saarin boqortooyo ku meel gaar ah kadib soo laabashadii Masiixa. Waxay diiradda saartaa wixii Masiixu sameeyey markuu ugu horreeyay, wuxuu ka dhex sameeyo kaniisadda hadda, iyo sida ugu weyn ee ay wax waliba ugu dhammaadeen weligood ka dib soo laabashadiisii.
Muuqaalka Amillennial ma lahan taageero kitaabiga ah. Si fudud looma eryi karo iyadoon wax la baran. Halkan waxaa ah buugaag kaa caawin kara inaad wax ka baratid ku saabsan Millennium.
Micnaha Millennium: Afar aragtiyood, oo uu tafatiray Robert Clouse, InterVarsity, 1977.
Muujinta: Afar Aragti: Tafsiir isbarbar socda
Tafsiir isbarbar socda], waxaa qoray Steve Gregg, Nelson Publishers, 1997.
Xilliga Millennial: Kala soocidda Kala-doorashada Evangelical
Kala sooc ikhtiyaar], waxaa qoray Stanley Grenz, InterVarsity, 1992.
Saddex Aragti oo ku saabsan Millennium iyo wixii ka dambeeya, waxaa qoray Darrell Bock, Zondervan, 1999.
Millard Erickson wuxuu qoray buugga ku saabsan kun-sanaanta iyo cutub wanaagsan oo ku saabsan buuggiisa Fiqi ahaaneed ee Masiixiga. Wuxuu bixiyaa dulmar guud ee xulashooyinka ka hor inta uusan go’aansan mid.
Dhammaan buugaagtan waxay isku dayaan inay qeexaan awooda iyo daciifnimada fikrad kasta oo ku saabsan kun-sannada. Qaarkood, qorayaasha waxay dhaleeceeyaan aragtida labada dhinac. Dhammaan buugaagtan waxay muujinayaan in su'aalaha ay adag yihiin iyo falanqaynta aayadaha gaarka ah ay noqon karaan kuwo aad u faahfaahsan. Taasi waa hal sabab oo dooddu u sii socoto.
Jawaabta milkiilaha guryaha
Sidee buu u taageerilaha taariikh-sannadeedka u la dhaqmi lahaa aragtida sanadka? Jawaabta waxaa ka mid noqon kara afarta qodob ee soo socda:
Buugga Muujintii waa qayb ka mid ah Kitaabka Quduuska ah mana dafiri karno waxbaristiisa si fudud sababtoo ah way adag tahay in la tarjunto ama sababta oo ah waa suugaanta aasaaska. Waa inaan u aqbalno sidii Qorniinka, xitaa haddii ay beddesho sida aan u eegno aayadaha kale. Waa inaan u oggolaanaa inuu soo bandhigo wax cusub, oo aan ku celinno waxyaabihii aan hore u soo sheegnay. Horey u qaadan karno horay uma sheegi doonto wax cusub ama wax ka duwan.
Muujin dheeraad ah ma aha mid khilaafsan soo dejinta hore. Waa run in Ciise ka hadlay sarakicidda, laakiin ma jiro wax is khilaafsan oo ka jira xaqiiqda ah in isaga lagu sara kicin karo dadka kale oo dhan. Markaa waxaan horay u haysanay laba dib-u-noojin ayaynu khilaafsanayn Masiixa, sidaa darteedna maaha wax is burinaya oo loo qaadanayo in mid ka mid ah sarakicidda loo qaybiyay laba ama in ka badan. Ujeedadu waxay tahay in qof walba la sara kiciyo hal jeer oo keliya.
Arrinka wejiyada dheeriga ah ee ka socota boqortooyada Ilaah. Yuhuuddu waxay sugayeen Masiixa oo isla markaaba soo bandhigi doona da 'da dahab ah, laakiin ma uusan keenin. Waxaa jiray farqi weyn oo waqtiga u dhexeeya fulinta waxsii sheegyada. Tan waxaa lagu sharaxay aayado dambe. Si kale haddii loo dhigo, ku darista waqtiyo aan hore loo arag khilaaf ma aha khilaaf - waa caddayn. Meelmarinta ayaa horey u jirtay oo lagu qabtay marxalado leh nusqaano aan horay loo shaacin. 1 Korintos 15 wuxuu muujinayaa wejiyadahan oo kale, iyo sidoo kale buugga Muujintii oo macnaheeda dabiiciga uugu badan yahay. Waa inaan ogolaanaa suurtogalnimada inay arrimuhu horumarin doonaan soo laabashada Masiixa kadib.
Muuqaalka sannadlaha ah uma muuqdo inuu si ku filan uga welwelsan yahay luqadda Muujintii 20,1: 3. Kaliya maahee sheydaanku wuu xidhan yahay, sidoo kale wuu xidhan yahay oo wuu xidhan yahay. Sawirka ayaa ah halka uusan wax saameyn ah ku laheyn, xitaa qeyb ahaan. Waa sax in Ciise ka hadlay xidhitaanka Shaydaanka iyo sax ahaanta inuu Shaydaanka iskutallaabta ku kaga adkaaday. Laakiin guushii Ciise Masiix ee shaydaanku wali si buuxda looma xaqiijin. Shaydaanku wali waa firfircoon yahay, wuxuu wali kufsadaa tiro badan oo dad ah. Akhristayaasha asalka ah ee ay silcin jireen boqortooyada xayawaanka uma sahlana inay u maleeyaan in Shaydaanku uu hore u xidhan yahay, si uusan mar dambe u khiyaanayn dadka. Akhristayaasha si wanaagsan ayey u ogaadeen in inta badan Boqortooyada Roomaanku ay ku jirto xaalad sasabasho.
Marka la soo koobo, kuwa raacaya aragtida Amillennial waxay ka jawaabi karaan: Haa, waxaan u oggolaan karnaa Ilaah inuu muujiyo waxyaabo cusub, laakiin kama fikiri karno bilowga in wax kasta oo aan caadi ahayn oo ku jira kitaabka Muujintii runtii ay yihiin wax cusub. Waxayse noqon kartaa fikrad duug ah oo dhar cusub gashan. Fikradda ah in sarakicidda sarakicidda ay ku kala bixi karto wakhti u dhexeeya micnaheedu maahan inay taasi tahay. Fikradeenna ku saabsan waxa ay akhristayaasha asalka ahi ka dareemeen Shaydaanka waa inay noqdaan tarjumaadkeena waxa ay
Astaamaha astaan-diidka ah runtii macnaheedu waa xakameyn Waxaan sameyn karnaa aragti macquul ah
ee buug ku qoran luuqad calaamadaha ah, ha dhisin qorshe qeexan.
Maxaan dhahnaa hadda markaan aragnay labada aragti ee ugu caansan Millennium-ka? Waxaan si badbaado leh u dhihi karnaa "qaar ka mid ah dhaqamada Masiixiyiinta waxay u turjumayaan kun sano sida dhabta ah 1000 sano ka hor ama raacitaanka Imaatinka Labaad ee Masiixa, halka kuwa kale ay aaminsan yihiin in cadeymaha Qorniinka ay soo jeedinayaan tarjumaad astaan ​​ah: waqti aan la cayimin oo ka bilaabmaya Sarakicidda Masiixu waxay bilaabmaysaa kuna dhammaanaysaa markuu soo noqdo. "
Millennium ma aha caqiido tilmaamaysa qofka Masiixiyiinta ah ee dhabta ah iyo kan aan ahayn. Ma dooneynno inaan kala saarno Masiixiyiinta iyada oo lagu saleynayo doorashadooda sida loo tarjumayo mowduucan. Waxaan aqoonsan nahay in si isku mid ah oo daacad ah, isla aqoon leh, iyo masiixiyiin isku aamin ah ay u imaan karaan gunaanad kala duwan oo ku saabsan caqiidadan.
Qaar ka mid ah xubnaha kaniisaddeenna waxay wadaagaan biloowga, qaar ka mid ah sannad dugsiyeedka, ama aragtiyo kale. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aan ku heshiin karno:
Waxaan dhamaanteen aaminsanahay in Eebbe oo dhan uu leeyahay awood oo dhan oo uu dhammayn doono waxsii sheegyadiisa.
Waxaan aaminsanahay inuu Ciise noo keenay boqortooyadiisa hore ee qarnigan.
Waxaan aaminsanahay inuu Masiixu na siiyay nolosha, inaan isaga la jiri doonno markaan dhimanno, iyo inaan ka soo sara kacno kuwii dhintay.
Waxaan oggol nahay in Ciise ka adkaaday Ibliiska, laakiin Shayddaanka ayaa wali raad ku leh adduunkan.
Waxaan ku raacsanahay in saamaynta shaydaanka mustaqbalka la joojin doono.
Waxaan aaminsanahay in qof walba uu kici doono oo lagu xukumi doono ilaaha naxariista leh.
Waxaan aaminsanahay inuu Masiixu soo laaban doono oo uu ka guuleysan doono cadaawayaasha oo dhan wuxuuna noo horseedi doonaa weligiin xagga Ilaah.
Waxaan aaminsanahay samooyin cusub iyo dhul cusub oo cadaaladdu ku fadhido, adduunkan cajiibka ah ee berrito weligiis wuu waari doonaa.
Waxaan aaminsanahay in daa'innimadu ay ka fiicnaan doonto kunka sano.
Waxaan heysanaa wax badan oo aan ku barbardhigi karno; uma baahnin inaan kala soocno oo ku saleysan aragtiyo kaladuwan oo ku saabsan amarka uu Ilaahay ku doondoono doonistiisa.
Taariikhda ee maalmihii la soo dhaafay ma aha qayb ka mid ah himilada kaniisadda ee wacdinta. Injiilku wuxuu ku saabsan yahay sida aan ku geli karno boqortooyada Ilaah, ma ahan taariikhda waqtiga markay wax dhacaan. Ciise muu adkayn taariikhda; kumana uusan dirin boqortooyo sii socon doonta muddo kooban. Qodobbada 260 cutub ee Axdiga Cusub dhexdiisa, mid keliya ayaa ka hadlaya Millennium-ka.
Fasiraada Muujintii 20 ka yeelno maqaal qodobka iimaanka ah. Waxaan haysannaa waxyaabo badan oo muhiim ah oo aannu wax ku wacdinno, oo annaguna waxaan haysannaa waxyaabo fiican oo aannu wax ku wacdinno. Waxaan ku wacdinaynaa in ciise masiix aan ku noolaan karno oo keliya qarnigan, ma ahan oo keliya 1000 sano, laakiin weligayo farxad, nabad iyo barwaaqo aan waligeed dhammaan.
Qaab dheellitiran oo loogu talagalay kunka sano
Ku dhawaad ​​Masiixiyiinta oo dhami way isku raacsan yihiin in Masiixu soo noqon doono oo xukun jiri doono.
Si kasta oo uu Masiixu sameeyo kadib soo laabashadiisa, qof rumaysta oo ceeboobi maayo.
Da'da weligeed ah waa ka sii sharaf badan tahay kunka sano. Ugu wanaagsan, Millennium waa kan labaad ee ugu fiican.
Amarka saxda ah ee taariikhdu ma aha qayb muhiim ka ah injiilka. Injiilku wuxuu ku saabsan yahay sida loo galo boqortooyada Ilaah, ma aha taarikhda iyo tafaasiisha jirka ee wejiyadaha boqortooyada qaarkood.
Sababta oo ah Axdiga Cusubi ma xoojinayo nooca ama waqtiga kunka, waxa aan ku soo gabagabeynayaa in aysan ahayn xudunta udub dhexaadka waajibaadka kaniisada.
Dadka waa la badbaadin karaa iyadoon la helin aaminaad gaar ah oo ku saabsan Millennium. this
Barta ayaa xudun u ah injiilka. Xubnaha waxay yeelan karaan fikrado kala duwan.
Si kasta oo ay tahay aragtida xubintu la wadaagto, isaga ama iyadu waa inay qirato in Masiixiyiinta kale ay si daacad ah u rumeystaan ​​in Kitaabka Quduuska ahi wax kale baray Xubnaha waa inaysan xukumin ama ku jees jebin kuwa leh aragtiyo kale.
Xubnaha ayaa is bari kara naftooda waxa ku saabsan waxa kale oo la rumeysan karo ayagoo akhrinaya mid ama in ka badan buugaagta kore.